सुशान्तको मृत्यु मुम्बईमा भएको थिएन? लास ल्याएर फ्ल्याटमा राखिएको दाबी….. « गोर्खाली खबर डटकम
सुशान्तको मृत्यु मुम्बईमा भएको थिएन? लास ल्याएर फ्ल्याटमा राखिएको दाबी…..
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको नि’धन भएको तीन महिना बढी बितिसकेको छ। अझैसम्म पनि सि’बिआई पुलिसले उनको मृ’त्युको र’हस्य पहिल्याउन सकेको छैन। सि’बिआई हेरेक को’णबाट सुशान्तको मृ’त्युसँग जोडिएका कुराहरू पता लगाउन लागिपरेको छ। आखिर के त्यस्तो भयो? जसले गर्दा सुशान्तले आफ्नो ज्या’न गु’माउनु पर्यो। यसैबीच सुशान्त के’समा अगाडि आएको ड्र’ग मा’मिलामा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती लगायत अन्यलाई हि’रासतमा राखिएको छ।
टाइम्स नाउको रिपोर्टका मुताबिक, सुशान्त के’समा सि’बिआईलाई केही ग’डबड महसुस भएको छ। सुशान्तका स्टाफहरूले गलत बयान न दिइरहेका छैनन्? सुशान्त १४ जुनका दिन आफ्नो मुम्बईस्थित फ्ल्याटमा मृ’त भेटिएका थिए। खबरका अनुसार सुशान्तले १३ जुनदेखि नै कसैको फोन र मेसेजको रिप्लाई गरिरहेका थिएनन्। यो कुरा उनकी दिदी मीतूले पनि बयानमा भनिसकेकी छन्।
छिमेकीहरूले सुशान्तको घरको बत्ती १३ जुनका दिन अन्य दिनभन्दा चाँडै निभेको र घरमा स’न्नाटा छाएको बताएका छन्। कुक नीरजले १४ जुनका दिन बिहान सुशान्तलाई नारिवल जु’स दिएको बताएका थिए तर हालै आएको पीएम रि’पोर्टमुताबिक सुशान्तको पि’साब थैली खाली पाइएको थियो। सुशान्तको रि’पोर्ट र उनको बारेमा बताइएका कुराहरूबीच मेल नहुँदा सुशान्तको मृ’त्युलाई लिएर अनेक सवालहरू उठिरहेका छन्।
पछिल्लो अपडेटअनुसार, सुशान्तको मृ’त्यु उनको मुम्बईस्थित फ्ल्याटमा नभएर उनको लो’नावलाको फा’र्महाउसमा भएको दाबी गरिएको छ । केही स्रोतहरूले सुशान्तको नि’धन फार्महाउसमा भएको र पछि ला’स मुम्बईस्थित फ्ल्याटमा ल्याइएको दा’बी गरेका छन्।
समाचारमा कत्तिको सच्चाई छ त्यो अझैसम्म पु’ष्टि भैसकेको छैन। १३ जुन र १४ जुनबीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन सि’बिआई लागिपरेको छ।